15zọ XNUMX ị ga-esi bawanye ọnụego ntụgharị Ecommerce gị | Martech Zone
Anyị na a na-arụ ọrụ na a vitamin na ụlọ ahịa mgbakwunye ịntanetị iji nyere aka mee ka ọhụhụ ọchụchọ ha na ọnụego ntụgharị. Njikọ aka ahụ ewe obere oge na akụrụngwa, mana nsonaazụ amalitela igosi. Ejiri saịtị ahụ chọọgharị ma degharịa ya site na ala. Ọ bụ ezie na ọ bụ saịtị na-arụ ọrụ zuru oke na mbụ, ọ nweghị ọtụtụ ihe dị mkpa iji wulite ntụkwasị obi ma mee ka ntụgharị ahụ belata maka ndị ọbịa ya.
Elọ ahịa ecommerce gị nwere ike ịpụ ego n'ụzọ karịa ka ị maara. Nyere aka tinye oghere ndị dị na bọket gị, n'agbanyeghị obere, ma jigide uru ndị ị rụsiri ọrụ ike iji nyefee ndị ahịa gị! Jake Rheude, mmezu Red Stag
Dabere na Baymard Institute, 68.63% nke ndị ahịa dị n'ịntanetị na-agbahapụ ụgbọ ahịa ịzụ ahịa ha n'ịntanetị Enwere ọtụtụ ihe kpatara nke ahụ nwere ike ime na mpụga njikwa saịtị gị… mana ka anyị lelee saịtị ecommerce gị na ihe ị nwere ike ime banyere ya. Ihe omuma a site na Red Stag Mmezu na-ejegharị n'ọtụtụ n'ime ebe elekwasị anya. Anyị atụkwasịla ụfọdụ nke anyị.
Otu esi eme ka onu ahia di na ntaneti
Social Media - 84% nke ndị na-azụ ahịa na ntanetị nyochaa ọ dịkarịa ala otu saịtị mgbasa ozi mmekọrịta tupu ha azụta. Mee ka mgbasa ozi mgbasa ozi gị dịkwuo ukwuu.
Vidiyo Ngwaahịa - Iji vidiyo vidiyo nwere ike ịbawanye ịzụrụ ngwaahịa site na 144%!
nchọ - Ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe dị mkpa na US dị ka esenidụt, uru nke saịtị a na-enweta gafere ndị ahịa nwere nkwarụ. A na-ejikwa saịtị ndị nwere ike ịnweta ka ịchọta ihe dị ndụ.
Design - Clear, ụzọ ntụgharị ụzọ arụ ọrụ a na-ahụ anya.
Nyocha na ogo - Nyocha ngwaahịa na ọkwa nyere ozi dị oke mkpa nye ndị na-azụ ahịa ka ha ghara ịhapụ saịtị gị.
nleba - Akaebe ndị ahịa dị mkpa, na-enye nzaghachi ndị ahịa ọhụrụ na ha nwere ike ịtụ anya ahụmịhe ka elu na nzukọ gị.
Ndụmọdụ ngwaahịa - Ọbịa mgbe ụfọdụ adịghị adaa na ezigbo ngwaahịa na peeji nke, n'ihi ya, na-enye ha mkpa na-enye dabere na ahịa, dị ka ngwaahịa, ma ọ bụ ahịa na-atụ aro nwere ike dịkwuo akakabarede udu.
Ihe Nleba Nche - Gosiputa baajị nke atọ iji mee ka ndị ọbịa mara na ị hụrụ maka nchekwa na nchekwa ha.
amụma nzuzo - Buru uzo nye ndi ahia otu ichoro ha ma jiri ozi ha.
Ịkwụ ụgwọ Nhọrọ - Nye PayPal, Stripe, Amazon ịkwụ ụgwọ, na kaadị akwụmụgwọ niile iji hụ na onye ọbịa gị nwere ike ịkwụ ụgwọ ụzọ ha chọrọ.
Mbupu - Ego na ọkwa na-ekele ndị na-azụ ahịa. 28% nke ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị ga-ahapụ ụgbọ ha ma ọ bụrụ na ọnụahịa mbupu dị oke
laghachi iwu - 66% nke ndị ahịa na-agụ nloghachi atumatu tupu ịzụọ ihe Mee ka ọ dị ngwa, dị mfe na n'ime oge oge ndị ahịa gị ga-enwe ntụsara ahụ!
Lelee - Nwalee usoro ndenye ọpụpụ gị iji jide n'aka na ọ dị mfe. Ajula ozi buru oke ibu, debe akwukwo nke oma, ma nyochaa omume onye ọrụ ya na maapu oku di elu na nyocha.
Speed - Arụ ọrụ mbipụta na ngwa ngwa loading peeji ga-ebibi gị akakabarede udu. Ebuli maka ọsọ na ọ ga-akwụ ụgwọ na dividends.
mobile - Ntughari mkpanaka na-ewe ihe karịrị 50% nke ole na ole n'ime saịtị ecommerce nke ndị ahịa anyị. Y’oburu n’ichoghi gi maka mkpanaka kacha mma, ị na-ere ahịa.
Tags: nnwetaLeleentụgharị ntụgharịdesignecommerce ndenye ọpụpụọnụego mgbanwe ecommerceimewe ecommercedịkwuo akakabaredemụbaa mgbanweJake Onyekweremcommercengwa ahiaecommerce ekwentịihu peejinhọrọ ịkwụ ụgwọNzuzo nzuzoNkwado ngwaahịavidiyo vidiyovidiyo vidiyoNtụleRed Stag Mmezunloghachi atumatulaghachi iwuNyochanchekwa baajịmbupuọsọ ọsọazụmahịa mgbasa ozintụgharị mgbasa ozi mmekọrịtaecommerce mmekọrịta mmadụ na ibe yaọsọtestimonials
Na-emesi obi ike: Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Mere nke Ọma
Dee 22, 2014 na 8: 19 AM
Kpamkpam kwenyere inweta ọtụtụ isi ihe ndị a dị ezigbo mkpa. Anyị kwesịrị ịnye kpọmkwem ihe ndị ahịa na-achọ. Nke ahụ bụ ebe a ga-enwe ịrị elu na ihe ịga nke ọma.
Dee 6, 2016 na 3: 36 AM
Ihe di egwu banyere ntughari na ahia. Ama otutu ihe ị ga-ewe site na nke a. Daalụ nke ukwuu